I-Semalt ixwayisa malunga neengozi yegama elingundoqo
Iinjongo zokukhangela zigxeke igama elingundoqo, kwaye akuyona into eyenziwa yi-SEO emhlophe. Kwakukho amaxesha apho igama eliphambili lokugxila lisebenza kakuhle ukubeka i-website kwi-intanethi. Ngaloo mihla, iinjongo zokukhangela i-Google ngokukhethekileyo ziyakwenza ngokukhawuleza ukulungiswa kwiphepha ngegama elingundoqo. Izikhundla zikwahlula kwinani elikhulu ngokubhekiselele kwingaphi amagama angundoqo ayenayo. Nangona amagama angundoqo ayengahambelani niche yewebhsayithi, yahlala iphinda iphumelele njengoko i-Google iphuculise ubuninzi bayo. Ngaloo xesha, ungazifihla lula amagama angundoqo kunye nobudenge phakathi kwemibala ehambelanayo okanye imvelaphi emhlophe - y dominios en. Ngokwemvelo, kwakhokelela kumava amaninzi amava njengoko abaninzi abantu bebengakhange bafune iiwebhusayithi ezazivame ukuvula phambi kwazo. I-Google kunye nezinye iinjongo zokusesha zaqala ngoko ukucoca amagama angundoqo afakwa kwiwebhusayithi kuba onke la masayithi ayengenalo ulwazi olunolwazi nolunenjongo.
Iziphumo zegama elingundoqo kunye nokuPhezulu kokuPhezulu:
U-Julia Vashneva, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-Customer style of "decoration-decoration: akukho; umda wezantsi: 1px eqinile;" href = "http: // semalt..com / "> Semalt I-Arhente yeDijithali, ilumkisa ukuba ukugxilwa kwegama elingundoqo ligxininiswa njengesiqalo somnyama we-SEO kwaye iyanqatshelwe ngokucacileyo. Makhe ndixelele ukuba kuya kuba neenzuzo ezimbalwa kwaye isiza sakho asikwazi ukufumana impumelelo kwithuba elide usebenze ngokukhawuleza okanye emva koko i-Google iya kugweba iwebhusayithi yakho ukuba ibamba ukuba uyagxininisa amagama angundoqo. Kukho amathuba okuba amaphepha akho aya kuhlonywa kwi rankings okanye asuswe ngokupheleleyo.
Matt Cutts, ingcali yeGoogle, walumkisa bonke abaphathi be-webmaster kunye neeblogger malunga neentlobo ezimnyama ze-SEO, ngokukodwa ngokubhaliweyo kwegama elingundoqo kunye nokuphucula ngaphezu kweenyanga ezimbalwa ezedlule. Inkampani izama ukudlala indima ebalulekileyo ekususeni nasekuhlawuleni zonke iiwebhusayithi ezenza izinto eziphambili rhoqo. Nangona ukulungiswa ngokugqithiseleyo kungavunyelwanga ngokuthe ngqo yiGoogle, iBing, ne-Yahoo!
I-Google izama ukwenza iGoogle Bot ingenangqondo kunaphambili, kwaye inkampani iyaxhatshazwa ngokugqithiseleyo kunye negama elingundoqo. Ngaloo ndlela, akufanele usebenzise amagama angundoqo kwikhasi elilodwa njengoko injini enkulu yokukhangela iya kuvinjelwa indawo yakho yokuphila. Ngamanye amazwi, sinokuthi i-Google ayiyi kukuthandayo igama elingundoqo eligxothayo nayiphi na indleko kwaye ngumdlalo onobungozi. Akunakukukhokelela naphi na, kwaye ishishini lakho liya kutshatyalaliswa.
I-Google kunye nezinye iinjongo zophando azifani nezicwangciso ze-SEO ezimnyama ikakhulukazi ezitshiziweyo kunye nokufuna ukuba abaphathi bewebhu bangawubethe i-algorithms zabo ngezobuchule. Faka amagama angundoqo ngokukhuselekileyo kumanqaku akho, kwaye ukunyaniseka kwegama eliphambili kufuneka libe phakathi kweepesenti ezimbini ukuya kwiihlanu. Esikhundleni sokusebenzisa okufanayo amagama amaninzi, kufuneka usebenzise umsila omfutshane kunye nomsila wamagama amakhulu kunye namabinzana kuwo onke amanqaku ukuze ubanike umboniso okhangayo kunye nobugcisa. I-WordStream inikezela abathengi bayo ezininzi ze-toolbar ze-SEO ezikunceda ukuba wenze umsila omfutshane kunye nemigca emide yomsila kunye kunye nokugcina iirekodi zamanqaku angakanani oye wasebenzisa ukutshisa inqanaba lokunyanzela. Enye ingcamango ukuzalisekisa amagama kunye neenjini zokukhangela aziyi kuluhlu lwewebhu.